Global Voices teny Malagasy » Tondra-drano any Fiji : “Safotra ny tanàna” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Janoary 2009 20:03 GMT 1	 · Mpanoratra John Liebhardt Nandika Lila
Sokajy: Fiji, Tsidika, Voina
Amy, mpilatsaka antsitra-po avy ao amin'ny Peace Corps, no nanoratra tamin'ny alahady 11 janoary tao amin'ny bilaogy The Island :
Taylar, mpilatsaka an-tsitrapo hafa avy ao amin'ny Peace Corps, no nibilaogy tao amin'ny Tropical Adventure  raha niaina ny rivo-doza hitany voalohany :
Ny tena voa mafy dia ny faritra atsinanan'i Viti Levu, nosy lehibe indrindra any Fiji. Indro ny sarin'ny tanàna nalain'i Abhay Nand ary nalefan'i Ratu M Radrodro tao amin'ny bilaogy Luve i Viti  .
Avy amin'ny bilaogy Luve i Viti (Zanaky Fiji)  :
Jonathan, terantany Amerikana monina sy mipetraka ao Fiji no nanoratra ao amin'ny Oceanic: User Experiences from the South Pacific , mahavita mandefa vaovao ao anatin'ny tondra-drano avy any Fiji lazainy ho “tsy misy fifandraisandavitra” fony izy tany New York. Sary mampiseho mpizahan-tany tavela ao anaty loza izany.
Mitondra zavatra mahaliana izany. Raha ny fampahalalam-baovao maro any Aostraly sy Nouvelle Zelande izay mifantoka amin'ireo mpizahantany tavela any amin'ny efitra fandraisam-bahiny sy ny toerana maro hafa any miaraka amin'ny mpandraharaha amin'ireny toerana ireny (na ireo miandry ny orana mitsahatra any amin'ny seranam-piaramanidina), inona no iraharahian'ny governemanta izay mbola manana filana hafa noho ny azy ireny ? Indro nalaina tao amin'ny bilaogin'ny governemanta, IG-Fiji .
Dickon Springate , avy any Royaumes Unis, eny an-dalana.
Avy amin'i Craig B , izay rendrika tao amin'i Coral Coast raha hiverina ny 8 janoary, taoriana kelin'ny nilatsahan'ny orana.
Avy amin'i DrewMarie , izay tonga tamin'ny fotoan'ny tondra-drano mihitsy.
Ny vaovao tsara tamin'ireto dia niaraka tamin'ny zotra an'habakabaka mankany Fiji ireto (Fiji’s Pacific Air): tsy afaka manova ny datin'ny andro handehanana ny vahiny raha tsy mandoa vola amboniny. Ny mpitoraka bilaogy nanoratra voalohany ny mikasika io dia i Babsiga .
Avy amin'ny fikambanana fiji-travelers  (mpandeha ho any Fiji), izay tany Suva nandritra ny fotoanan'ny tondra-drano.
Ny lahatsoratra avy amin'i Brooks , mpivady teran-tany Amerikana tany Fiji nandritra ny rivo-doza :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/01/16/1507/
 The Island: http://theshamester.blogspot.com/2009/01/oi-lai-tamana-or-oh-shit.html
 Tropical Adventure: http://bloggingwithtaylar.blogspot.com/2009/01/its-raining-cats-and-dogs.html
 Luve i Viti: http://luveiviti.blogspot.com/2009/01/below-are-some-pictures-forwarded-from.html
 Oceanic: User Experiences from the South Pacific: http://blog.oceanic.com.fj/oceanic_user_experiences_/2009/01/thoughts-from-abroad.html
 Dickon Springate: http://manofmysterywriteson.blogspot.com/2009/01/totally-flooded-out-of-nadi-fiji.html
 Craig B: http://www.travelblog.org/Oceania/Fiji/Suva/blog-361593.html